Fifamaliana tao anaty fiara :: Mpamily taksibe sy ny mpanampy azy nandratra mpandeha - ewa.mg
News - Fifamaliana tao anaty fiara :: Mpamily taksibe sy ny mpanampy azy nandratra mpandeha
Maratra mafy, tapaka ny tongotry ny lehilahy iray mpandeha tao anaty taksibe teny Ampamantanana-Androndra, tamin’ny alakamisy 2 septambra lasa teo. Vokatry ny fifamaliana teo amin’ilay mpandeha sy ny mpanampy ny mpamily noho ny taingim-be tao anaty fiara no nitarika ny vono sy ratra niniana natao tamin’ity mpandeha. “Tsy mbola nahazo ny fitarainan’ilay mpandeha izahay”, hoy ny kaomisera Wheins Ostrom, lehiben’ny polisy monisipaly.
“Nandeha tamin’ny taksibe iray avy any Ambohimiandra nankany Ampamantanana ny lehilahy iray. Teny an-dalana, voalaza fa tsy nitsahatra nampiditra olona ny mpanampy ny mpamily. Noho ny habetsahan’ny mpandeha tao anaty fiara dia niteny ilay lehilahy fa betsaka loatra ny olona ao anaty fiara. Tezitra ny mpanampy ny mpamily vokatr’io teny io ka niafara tamin’ny fifamalian’ny roa tonta. Tonga teny amin’ny fiantsonan’ny fiara ilay taksibe eny Ampamantanana. Mbola nitohy ny fifamaliana ary niafara tamin’ny fikasihan-tanana ilay mpandeha”, hoy ny loharanom-baovao.
Fanampian’ny lehiben’ny fokontany
Tonga teny an-toerana ny lehiben’ny fokontany nanasaraka sy nitondra ny maratra haingana tany amin’ ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha. Mbola any amin’ny hopitaly io lehilahy io hatramin’ny omaly. Miaina tsara manohy ny asany toy ny isan’andro tsy manana ahiahy ny mpanampy sy ny mpamily voalaza ho nahavanon-doza.
“Tsy mbola nahalala ny zava-nisy izahay hatreto. Mifehy ny asan’ny taksibe eto an-drenivohitra ny bokin’ andraikitra. Voahaja ve ny bokin’andraikitra sa tsia? Raha misy ny tsy fanajana izany dia mandray fepetra ny kaominina manasazy. Mety hiafara amin’ny fisintonana ny fahazoan-dalana mitrandraka an’ilay taksibe ny fanasaziana. Ny mpandeha indray, raha mahatsikaritra tsy fanajana bokin’andraikitra, dia afaka mampandre ny kaominina avy hatrany. Miantso io olona niharam-boina io izahay mba hametraka fitarainana eny amin’ny Lapan’ny tanàna na hanatona avy hatrany ny foibe ny polisy monisipaly eny Anosimpatrana”, hoy ny kaomisera Wheins Ostrom, lehiben’ny polisy monisipaly.
L’article Fifamaliana tao anaty fiara :: Mpamily taksibe sy ny mpanampy azy nandratra mpandeha est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 07/09/2021
Pilo kely #4461 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4461 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
« Sao hagnenina » de Ljo très prisé en matière de dance cover. (Copyright : Loïc photography) Petit à petit, le monde essaie de s’habituer à vivre avec le coronavirus. Tant bien que mal dira-t-on, et certains se trouvent plus dans une impasse que d’autres. Comme bon nombre de personnes dans le monde, les musiciens et chanteurs ont opté pour les interactions en ligne. Parmi ceux qui percent se trouve Ljo. Sur les réseaux sociaux, son morceau fait l’objet de reprises pour le bonheur des fans. Pour sa part la danseuse Olivia Faridah sort du lot en choisissant de faire un « dance cover ». A mi-chemin entre la danse contemporaine et urbaine, la jeune femme fait preuve de talent et de créativité. Malgré la pandémie, Ljo fait partie de ces jeunes qui continuent de se frayer un chemin dans le monde de la musique. Après « Ninao », son duo avec Lion Hill, le jeune homme enchaîne les succès avec « Sao hagnenina ». La chanson en hommage aux disparus a produit l’effet escompté en matière de popularité. Par ailleurs, les singles de Ljo sont disponibles sur les plateformes légales, en attendant les ouvertures de scène. Zo Toniaina L’article Musique : La dance cover en vogue est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Musique : La dance cover en vogue a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Araka ny tatitra nataon’ny Departemantam-panjakana amerikanina misahana ny ady amin’ny famarinana olona amin’ny tsy rariny dia nisy fivoarana kely ny laharan’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Niakatra ho sokajy faharoa i Madagasikara taorian’ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana malagasy momba ny ady amin’ny famarinana olona amin’ny tsy rariny. Isan’izany ny fanenjehana an’ireo olona tompon’antoka tamin’io famarinana amin’ny tsy rariny io. L’article Famarinan’olona est apparu en premier sur AoRaha.
Ho hetsika hanandratana ny mozika sy ny mpanakanto. Tsy mivaona amin’izay ny fanao maneran-tany, ho fanamarihana ny “Fetin’ny Mozika”. Ho an’ny eto Madagasikara manokana, hiavaka ny amin’ity taona ity satria tsy ny 21 jona fotsiny ihany ny homarihina izany fa mandritra ny herinandro manomboka ny 14 jona. Tsy vitan’izay, hampitaina amin’ny alalan’ny teknolojia amin’ireo tambajotran-tserasera sy handeha amin’ny fahitalavitra izany, noho ny mbola famerana ny isan’ny afaka manatrika mivantana ny fampisehoana. “Efa an-taony maro ny nanamarika ny “Fetin’ny Mozika” ny tambajotran’ny Alliance française eto Madagasikara. Mpanakanto aman-jatony ny efa nandray anjara ka tao ireo vao nisondrotra nampiana hahazo sehatra, ary maro koa ireo efa malaza no afaka nizara ny kantony. Noho ny zava-misy iaraha-miaina, nampitain-davitra fotsiny ny fanamarihana tamin’ny taon-dasa. Amin’ity kosa, hotanana ihany izay, saingy hivelatra bebe kokoa satria hisy seho avokoa manerana ireo Alliances françaises 17”, hoy ny nambaran’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Alliance française eto Antananarivo, Raharinosy Monique, omaly, tetsy Andavamamba. Ho tontosa vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Telma sy ny tambajotran’ireo Alliances françaises ny hetsika amin’ity. “Maro ireo hetsika zavakanto notohanan’ny Telma, hatramin’izay. Misy ireo nanosika sy nampahafantatra ny talenta vao. Tao koa anefa ireo nanasongadina ireo efa anatin’ny laza teto ka hatrany ivelany. Hotohizana hatrany izany, ary mifanandrify amin’ny tanjon’ny Telma rahateo ny fisehon’ny hetsika amin’ity. Efa miroso amin’ny hetsika ampitain-davitra kanefa manaraka ny fenitra isika”, hoy kosa ny nambaran-dRamaroson Rado, tompon’andraikitry ny fiaraha-miasa ivelany ao amin’ny Telma. Tsy àry ho voatanisa, raha ireo tarika sy ny mpanakanto handray anjara amin’ireo tanàn-dehibe 17 amin’ity. Hosinganina manokana kosa ny ao Antsirabe, handray an-dry Faniry Quartet ny 12 jona, i Mamy Bastah, i Jesus Soldiers ary i Samöela kosa ny 19 jona. Ho an’AFT Andavamamba kosa, fantatra fa handray anjara ny tarika Ambondrona, Fy & Reko hisy Band, Gaëlle, sns.Zo ny AinaL’article Hiavaka no ho ny isan-taona: homarihina amin’ireo Alliances 17 ny “Fetin’ny Mozika” a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa: nomen’ny zandary fitaovam-piadiana ny mpiandry fonja sy ny polisy
Ho fifanohanana eo amin’ny asa fampandriana fahalemana, nanolotra fitaovam-piadiana toy ny basy sy bala ho an’ny fandraharahana fonja eo ambany fiadidian’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ho an’ny Polisim-pirenena ny Zandarimariam-pirenena, omaly tolakandro teny amin’ny Toby Jly Ratsimandrava. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ara-pomba ofisialy fanolorana ny minisitry ny Fitsarana sy ny minisitry ny Filaminam-bahoaka ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena notronin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ireo departemanta mpiara-misehatra amin’ny fandriampahalemana. « Mila ezaka sy firahalahiana hatrany ny eo amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana fa tsy vitan’olon-tokana. Anisan’ny laharam-pahamehana ny ady atao amin’ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra. Tsy latsa-danja amin’izany koa anefa ny fiambenana ny fonja izay hita fa mila fanampiana raha tsy hilaza afa-tsy ny mahakasika ny fonjan’i Farafangana tsy zovina amintsika ny zava-niseho tao tamin’iny taon-dasa iny », hoy ny Seg, ny Jly Ravalomanana Richard. Basy Mas 36 miisa 150 miaraka amin’ny bala 7 500 isa no natolotra ho an’ny minisiteran’ny Fitsarana ary basy Mas 36 miisa 50 miaraka amin’ny bala miisa 10 000 kosa ny natolotra ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka ho fanampiana ny efa eo am-pelatanan’izy ireo. Nomarihin’ny Seg fa fitaovam-piadiana tafaverina avy eny am-pelatanan’ny dahalo ireo ka tsy novidiana intsony ary efa voatsirika ary hita fa mbola afaka miasa tsara.Jean Claude L’article Fiaraha-miasa: nomen’ny zandary fitaovam-piadiana ny mpiandry fonja sy ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Fotodrafitrasa eny ifotony: hohenjehina ny fahataran’ny asa amin’ny lalana RN9
Nidina ifotony nijery sy nanara-maso ny fizotry ny asa fanamboaran-dalana RN9 tany Manja ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP), Andrianainarivelo Hajo sy ireo tekinisianina ny herinandro teo. Nisy ny olana saingy efa an-dalana ny asa.« Nisy ny olana noho ny hamehana ara-pahasalamana ka ilaina ny manao ezaka hanatrarana ny fahatarana amin’ny tetikasa. Efa an-dalana ny asa amin’izao fotoana izao na nisy aza ny fahatarana ka hotratrarina mialoha ny faran’ny taona sy ny fotoam-pahavaratra izany mba hampitohy tsy misy fahatapahana ny lalana. Efa vonona avokoa ny fitaovana hanenjehana ny fahatarana. Hatao tara avokoa izany mandra-pahatonga any an-tampon-tanànan’i Manja. Efa 15 % izao ny fandrosoan’ny asa », hoy ny minisitra Andrianainarivelo Hajo.Mampiasa ny akora toy ny vato eny an-toerana ny orinasa. « Misy fitaovana ampiasaina hijerena ny akora ilaina, ialohavan’ny andrana teknika mba hampanaraham-penitra izany ary mampiasa laboaratoara koa hitsirihana ny kalitaon’ny akora fanamboaran-dalana ny orinasa », hoy ny mpandrindra ny tetikasa PCACF, Razafimahefa Ando Nantenaina.Mifanindran-dalana amin’izany ny tetikasa fanohanana ny eny ifotony, niainga amin’ny fangatahan’ny kaominina manodidina, nahafeno ny fepetra sy nofidina manokana.… « Misy koa ny fanamboaran-dalana mampitohy ny kaominina mihazo ny RN9 iarahana amin’ny MATP sy ny mpamatsy vola, Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad), ny « Agence routière » sy ny tetikasa PACFC », hoy ihany izy. Anisan’ny hatao tara koa ny lalana eo Analamisampy mihazo ny any Bevoay, mirefy 86 km.Anisan’ny fanavaozana nentina amin’ny tetikasa iarahana amin’ny MATP ny fametrahana ny birao fanaraha-maso ny asa sy ipetrahan’ireo mpanara-maso. Mijanona ho fananan’ny fanjakana izany fotodrafitrasa izany aorian’ny tetikasa.Hampiroborobo ny toekarena sy ny fihariana ary ny sosialy ny hahavitan’ny fanamboaran-dalana sady sambany rahateo izany tetikasa izany ho an’ny any an-toerana. Resy lahatra ny solontenan’ny mponina. Anisan’ny vokatra any an-toerana ny vary, tsako… « 2 5000 Ar ny saran-dalana, indrindra rehefa fotoam-pahavatra izao nefa tokony ho 15 000 Ar. Ho vita izao ny lalana ka mankaty aty avokoa ny fiara rehetra ary hitondra ny vokatray. Mba hitaingina Bajaj izahay… », hoy izy ireo.Sary sy soratra : Synèse R. L’article Fotodrafitrasa eny ifotony: hohenjehina ny fahataran’ny asa amin’ny lalana RN9 a été récupéré chez Newsmada.
Tsipy kanetibe – 2 taon’ny Pac: fiara “Audi 100” ho an’ny mpandresy amin’ny fifaninanana
Feno roa taona amin’ity taona ity, ara-panjakana, ny Pac (Pétanque Ampitatafika club). Misy, araka izany, ny fifaninanana karakarain’ny klioba hanamarihana izany tsingerintaona izany, hatao ny 1 sy 2 jona izao eny amin’ny kianjan’ny Pac eny Ampitatafika. Hanomboka anio ny fandraisana ny anaran’ireo handray anjara, eny amin’ny CBT (Club des boulistes de Tananarive). Misokatra ho an’ny sokajy rehetra “doublette”, lahy sy vavy, (juniors, seniors, vétérans) ny fifaninanana. Loka maro sy goavana ny hozaraina amin’izany. Ho an’ny sokajy “seniors”, fiara Audi 100 ny ho azon’ny voalohany, ankoatra ny medaly sy ny amboara. Hahazo moto ny laharana faharoa ary fahitalavirta “ecran plat” kosa ny laharana fahatelo sy ny fahefatra. Eo amin’ny sokajy “juniors” kosa, samy fahitalavitra “ecran plat” ny laharana voalohany. Hampiavaka kely ny an’ny “veterans” ny fahazoana vorintsiloza, amin’izao ankatoky ny asaramanitra izao, toy izany koa ny sokajy vehivavy, hahazo loka tsy ampoizina amin’io fotoana io.Raha tsahivina, nanomboka nisokatra ara-panjakana, ny taona 2017, ity klioba ity ary ny volana jona 2018 ny nitokanana ny kianja mitafo vaovao eny Ankadintany, kaominina Ampitatafika. Anisan’ny kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity “boulodrome” ity ary efa nandray lalao maro tao anatin’izay roa taona nijoroany izay, raha ny nambaran-dRakotoson Zo Heriniaina, filohan’ny Pac. Manana mpilalao manana ny maha izy azy sy efa mifaninana matetika amin’ny lalao nasionaly sy iraisam-pirenena ihany koa ity klioba ity. Raha 18 monja tany am-panombohana ny isan’ny mpilalao, efa mihamitombo hatrany izany ankehitriny.Nanamarika ny filohan’ny klioba fa fialamboly ary fahafinaretana ny tadiavina amin’ity fifaninanana ity fa tsy fakana tombony akory, sady fitsangantsanganana ho an’ny klioba ihany koa. Hisy ny fiara iombonana, rahampitso asabotsy, hiainga eny amin’ny CBT Mahamasina, amin’ny 6 ora sy sasany maraina. Mi.RazL’article Tsipy kanetibe – 2 taon’ny Pac: fiara “Audi 100” ho an’ny mpandresy amin’ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
Vonjy aina :: Nalaina tamin’ny angidimby ilay zandary narary
Voatery nentina tamin’ny angidimby avy any Ankavandra Miandrivazo niakatra aty an-drenivohitra ny zandary iray mitondra ny galona zandary Kilasy faharoa. Fantatra fa narary mafy voan’ny tazo mahery, nanomboka ny zoma lasa teo, izy. Tsy vita tany Ankavandra ny fitsaboana azy ka voatery nakarina aty an-drenivohitra. Tonga teny Betongolo, afak’ omaly, ny angidimby nitondra azy. Nentina avy hatrany notsaboina eny amin’ny hopitaly Miaramila Soavinandriana ilay zandary marary. Nifanome tanana namonjy an’ity zandary marary ity ny fokonolona sy ny namany tany Befotaka-Itondy Miandrivazo noho ny aretina mahery nahazo azy tao an-tranony, tamin’ny alin’ny zoma lasa teo. Dia an-tongotra nandritra ny ora dimy no natao niakarana tany Ankavandra. Tsy vita tany an-toerana anefa ny fitsaboana. Noho ny halaviran’ny toerana sy ny fitsaboana no antony nandefasana angidimby nakàna azy. Efa nisy zandary marary nalaina tamin’ny angidimby tahaka izao ihany koa tany Ampasinambo Mananjary. L’article Vonjy aina :: Nalaina tamin’ny angidimby ilay zandary narary est apparu en premier sur AoRaha.